Ny orinasa efa nahavita ICTI Toy International Association fanamarinana, ISO9001: 2008 toetra rafitra fitantanana ny taratasy fanamarinana, EU BSCI hanoherana andraikitra ara-tsosialy sy FSC taratasy fanamarinana taratasy fanamarinana. Ny vokatra dia ahitana tandavan-pampianarana kilalao, saribakoly trano, fiaran-dalamby milentika, hazo-tsaina, zavamaneno, hazo biriky sns mba hitarika rehetra zazalahy sy zazavavy ho hanitra, sambatra, manaitra mbola kely dia ny firariantsoa tsara indrindra.
Rehetra ny vokatra no vokarina ny toetra tsara sy ny tsara ny antsipirihany hihaona ny mpanjifa ny fitakian'ny. Misokatra isika hanao OEM vokatra araka ny mpanjifa 'famolavolana. Amin'ny matihanina manan-karena traikefa sy fahalalana eo amin'ny kilalao sy asa-tanana, dia homenay anao soso-kevitra tsara, izay manao ny vokatra azo antoka kokoa ny zava-nitranga rehetra ilaina fitsapana sy manana varotra tsara ao an-tsena.